Kana iwe uri kushandisa vhezheni isati yasvika 1.36.2 yeBlock Origin iwe unofanirwa kugadzirisa izvozvi | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura kusagadzikana kwakaburitswa mu iyo yakakurumbira browser yekuwedzera "UBlock Chibviro" izvo zvinogona kukonzeresa kurovera kwetsika yomushandisi kana kusvika padanho rekushaya ndangariro paunenge uchivhura URL yakanyatsogadzirwa kana iyo URL ikawira pasi pe "solid blocking" mafirita.
Iyo yakatarwa kunetsekana zvinongoratidzika chete kana mushandisi aenda akananga kune chinetso url, semuenzaniso, kana iwe ukabaya pane iyi link.
Kuvharira kwakasimba kunoshanda nekuvhura peji renyevero rinopa ruzivo nezve chakavharirwa sosi, inosanganisira iyo URL uye firita iyo yaitadzisa zviwanikwa kurodha Peji reyambiro rinoratidzawo parameter yemubvunzo weiyo yakavharidzirwa URL kubatsira vashandisi kudzivisa kuteedzazve.
Mune shanduro dzakapfuura dzeBO, ma parameter aya akadzokororwa akawedzeredzwa kuDOM pasina chero kudzika cheki, izvo zvinogona kutungamira mukuwedzera kukuvara uye kupera kwekurangarira, zvinoenderana nebrowser uye Hardware. uMatrix uye ηMatrix, forogo yeMatrix inoenderana nePale Moon, inogovera yakafanana kodhi yekuratidza yakaparadzaniswa ma URL parameter
Izvo zvinotaurwa kuti iyo yakaonekwa kunetseka yakagadziriswa nenzira yakakodzera mukuvandudza Block Chibviro 1.36.2. Kunyangwe zvichitaurwawo izvozvo uMatrix plugin inobatwawo yedambudziko rakafanana, asi kugadzirisa kwaro kwakamiswa uye zvigadziriso hazvichaburitswa, saka mhinduro chete ndeyekubvisa kuwedzera kwebrowser.
Kubva hapana mhinduro muMatrix (pakutanga zvakakurudzirwa kudzima ese mafirita akaomarara kuburikidza ne "Assets" tebhu, asi kurudziro iyi yakanzi haina kukwana uye inogadzira matambudziko kune vashandisi nemitemo yavo yekuvharira). Mu ηMatrix, forogo yeMatrix kubva kuPale Moon chirongwa, kusagadzikana kwakagadziriswa mushanduro 4.4.9.
Vashandisi vanofanirwa kugadzirisa kuBO 1.36.2 uye ηMatrix 4.4.9 kuti vagamuchire zvigadziriso zvekuchengetedzeka kwekuchengeteka, izvo zvinokanganisa zvigadziriso zvekumisikidza zvezvose zviri zviviri.
Nezve kusagadzikana zvinonzi zvinokonzerwa nekuti yakasimba yekuvharira firita inowanzo tsanangurwa padanho redomain uye inoitirwa kuramba kubatana kwese, kunyangwe iwe uchitevera chinongedzo zvakananga.
Ndokunge, kusagadzikana kuri kukonzerwa nenyaya yekuti kana uchifamba kuenda kune peji rinokodzera kune yakaoma yekuvharira firita, yambiro inoratidzwa kumushandisi, ichipa ruzivo nezve chakavharirwa sosi, kusanganisira iyo URL uye paramita yekukumbira. Dambudziko nderekuti uBlock Akatangisa maratidziro echikumbiro zvakare uye inovawedzera iwo kumuti weDOM zvisinei nezinga re nesting.
Mafirita akasimba anowanzo shandiswa kuvharira masayiti anoita redirected redirect, kushandira software yakaipa, kana kusadikanwa kushanya. Ivo anowanzo shandiswa padanho rezita (semuenzaniso, googlesyndication.com) uye vanowanzo fananidzwa nezvakanyorwa mumafaira emahombekombe, kunyangwe ivo vachigona zvakare kunongedzera zvakanyanya zviwanikwa
Nekubata yakanyanya kugadzirirwa URL muBlock Chibviro cheChannel, zvinokwanisika kuvharidzira maitiro ari kuita browser ye browser. Mushure mekuvharira, kudzamara maitiro ne plugin atangwazve, mushandisi akasara asina kuvhara izvo zvisingadiwe zvemukati. Firefox yapera ndangariro.
Kune rimwe divi, vamwe vashandisi vakataura izvozvo muNoScript, ivo vaona kuvepo kwekukanganisa kunotungamira ku100% CPU mutoro muFirefox kana uchivhura mamwe masayiti, saka izvozvi kuti ugadzirise izvi, unofanira kuvhara Firefox zvachose wozovhura maneja webasa uye womirira kuti chirongwa ichi chipedze. Ipapo, Firefox inofanira kutangwazve kana maitiro acho anofanira kumiswa kuvhurazve bhurawuza uye kutanga nechikamu chakapfuura.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo unogona kubvunza ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kana iwe uri kushandisa vhezheni isati yasvika 1.36.2 yeBlock Origin iwe unofanirwa kugadzirisa izvozvi